Ikhaya: Ukukhulula Isixhobo
Iprojekthi yamanzi eManyeneyo
Yiba ngu Mthengisi
Yiba NguMntu Ngokwenene Ufuna Ukuba Nguwe!
Isixhobo sakho esipheleleyo sokuzivelela esakho ngokwendalo.
Sika kwimiqolo yempendulo enemigangatho kunye nokuziphatha, kwaye ube ngumntu onjalo ngenene.
I-Alchemical Utatu yinguqulelo entsha yesixhobo sonyango esisebenzayo esenziwe ukuze ukwazi ukuba ngumntu obesoloko unjalo.
UBathathu Emnye unamayeza amathathu avela kuhambo olulungelelanisiweyo:
I-Blue Lotus lonyango
Ezi zonyango zintathu zisebenza kunye ukucacisa oko kusibophelelayo. Uncedo ngalunye kwezi lunendima eyahlukileyo ekufuneka luyidlalile kukungazifumani zonke iimeko zentlalo, iipateni kunye neenkumbulo ezisigcina sibambekile kwiinkolelo kunye nokuziphatha okungasisebenzisiyo.
UKUBHALISWA KWI-EXCLUSIVE UPDATES
Ndiyavuma ukukhuphela i-Liberation The Remedy ukuqokelela iinkcukacha zam kule fomu.
Ubuchwephesha beTeknoloji yamandulo yexesha lobudala
Ukukhululwa kubeka umgangatho wendawo entsha yokulungiswa komntu kunye nokukhusela izixhobo. Ukuhlanganiswa kwamandulo kwindlela yokuvuselela i-alchemical remedies evusiwe kwaye ikhuliswe ngeteknoloji yakutshanje yakuthatyathwa, ivelisa ubomi obutsha kwizinto ezinamandla kunye ezinzulu ezisebenzayo kodwa ezinokuthobeka.
I-remedy ehamba ngentetho ngokukwazi kwayo ukuxhasa abantu ekusebenziseni ingqondo, umzimba kunye nomphefumlo ngokuhlanjululwa kweempawu ze-karmic kunye neengxakatho zengqondo. Ukukhululeka kwale mijelo enamandla kunika elinye amandla emva koko sonke sinokuba ngubani esasifanele ukuba sisuka ekuqaleni, sikhululiwe kwaye sikhululekile.
Ukulandela iindlela zokupheka zamandulo, uluhlu olukhethiweyo lwezityalo, izityalo kunye neengxubevange zenzululwazi ezenzelwe ukudala.
Iimfompo zokukhulula kwizithethe zamandulo nezomoya ezingcwele. Oku kunceda amandla okugcoba ngengqondo nangokomzwelo.
Ukudibanisa amanzi omhlaba ngokuvumela ukukhululeka ukunambitha kunye nokuxutywa kunye neendlela ezingcwele zehlabathi ukuze zidibanise bonke ndawonye.
Yintoni Abanye Abafumana Inkululeko?
Yiva oko abanye bathethayo malunga namava abo kunye noKhuseleko. Ubungakanani benguqu kwimimiselo engokwenyama, yengqondo, yemimoya neyenokomoya!
Jonga ezinye iiVideos
Ixesha elizayo leTheknoloji
Iimfihlelo zamandulo, zityhilwa.
Ikhnoloji yezobuKrestu kunye ne-alchemical ekwakheni indlela entsha yokulungisa nokuphila ubomi. Ukukhululwa kusebenzisa iteknoloji esanda kufumanisa kunye nefomula yamandulo, ngoku ifunyanwa kubo bonke.
ugxininiso, amandla kunye nokulinganisela
Xa ingqwalasela ingasetyenziswanga ekusebenziseni imodeli endala ekhutshwe ngaphandle komzimba sikwazi ukuzisa onke amandla ethu ukuba athwale kuyo nayiphi na imisebenzi. Kwakhona kuthetha ukuba asiyikuchitha ixesha lethu lokuhlala okanye ukukhathazeka ngekamva. Oku kuguqulela ekugqithweni okuncinane emzimbeni, nathi kufuneka silale ngokuncinci njengoko sihamba ngokukhawuleza ngaphakathi nangaphandle kokuphumla.
Ukukhupha idala, yenza indawo entsha
Xa sihlambulule indlela yokuziphatha esivame ukubandakanya kuyo njengenxalenye yembali yethu kunye nokufunda imemori, asisayi kubanjwa kwiidrama zemvakalelo zobomi bethu. Ukukhulula oku kukukuzisa konke ukubonakala emzimbeni, ukuva nokukhutshwa kanye kunye. Emva koko iimvakalelo zinokuvela ngokuqhelekileyo ngaphandle kwesibophezelo esivela kwixesha elidlulileyo ukuphendula nangayiphi na indlela kwaye sinokuzibandakanya nabo okanye kungekhona ngaphandle kokuthambekela ekubanjweni kumgibe wabo ogqithisayo.
Emva koko sinokukhetha ukunqumla i-lotus emanzini ngaphandle kokuwela.
Gcwalisa Ubume Bendalo
Buyela ekhaya kwimeko yakho yendalo
Tune kwi-energy ngaphakathi ecacileyo ngokucacileyo malunga nesikhokelo sakho, injongo kunye nenjongo kulo mpilo. Ukukhululwa kukuxhasa omnye ekuvuleleni ukucaca kwangaphakathi, kuququzelela ukudibanisa nekhampasi yawo yangaphakathi, ukukhokela enye kuyo yonke imizuzu kwimeko yesininzi, ukukhulula kunye nokuzonwabisa.
Ukukhululwa kwakho, Ulindele.
I-Spectrum epheleleyo ye-Formula ye-Alchemical Formula
Iifom epheleleyo yeezithako, ukulungiswa ngokucophelela, ukulungiswa kunye nokuhlanganiswa ukwenza ifom, UKUBHALA.
Ukuqulunqwa kwezinto zakudala ezenziwe kwii-9 eziqingqiweyo eziye zatshiswa ngamaxesha e-100 ukukhupha amandla abo okuhlaziya nokuhlambulula.
Iminerali ehlambulula amanzi kwaye isebenze njengekhuseleko lombane. Ekubeni igazi liyininzi lamanzi lunefuthe elinzulu kunye elinamandla kwigazi elithwala ingqondo yethu.
Uthuli luqokelelwe kwaye lunokuthi luvela kwimililo ye-4 evuliwe ngokuqhubekayo kwiminyaka yokugqibela ye-50. Umlilo wesihlanu lilanga. Le ashini ibonisa ukugxilwa okukhutshwe ngokukhutshisiwe kwimiinyaka engamashumi amahlanu yokuguqulwa nokucoca.
Umsindo we-Durga we-vibrational sounding for transformation and change, evumela ukuba iindwendwe zenzeke ngokukhawuleza njengoko izinto zicacile
Ivelisa ukushiya okufana neyomntwana yokunandipha okulula kwizinto ezincinci, umvakalelo wengane ebukela iflyflyfly okokuqala.
I-mushroom e-adaptogenic eyanceda ukudibanisa zonke izithako ngokubambisana, kubangenisa kwi-synthesis and balance
Ukusasaza inkululeko ngokusebenzisa umnxibelelwano wabasemakhaya nabasemhlabeni. Ukuxhuma amandla, amanzi kunye nabantu behlabathi ngokusebenzisa le mpendulo enamandla.
Iprojekthi Yomnxibelelwano Wamanzi
Unyango lwe-Alchemical Utatu
I-Redemption Diamond - 10ml
Phakethe yeZiqu zintathu
Ukukhutshwa kweNkcazo yeMpilo
Silandele nge Instagram
© Copyright 2018 onke amaLungelo agciniweyo LiberationtheRemedy.com Iingxelo kule webhusayithi azivavanywa nguLawulo lokutya kunye neziyobisi. Naziphi na iimveliso ezixutyushwe okanye zithengisiwe azenzelwe ukuba zichaze isifo, ukunyanga, unyango okanye ukuthintela nasiphi na isifo. Iziphumo zobungqina aziqhelekanga. Abathengi banokuba basifumene isiqinisekiso sezipho emva kokungenisa ubungqina babo. Ukuba ukhulelwe, unesi, uthatha amayeza, okanye uneemeko zonyango, bonana nodokotela ngaphambi kokuba usebenzise nasiphi na isongezelelo sokutya. ^ Unikelo olupapashiwe kule ndawo, kubandakanya nezicwangciso ze-AutoShip, zisebenza kubathengi abathengisi kuphela, hayi iingcali okanye abathengisi beenkonzo abathengisi abathengisayo. Ukuhanjiswa simahla kuhanjiswa kubathengi baseMelika kuphela.